Elephant Focused Projects - Conservation Travel Africa
Elephant Focused Projects
How much: from US$1,515 (2 weeks) Support award-winning conservation to save endangered and threatened wildlife species in Africa. Make a direct contribution, and get involved in some of South Africa s most important and exciting cons...
Rhino & Elephant Conservation Location: Zimbabwe
How much: from US$900 (1 weeks) Be a wildlife conservation volunteer on this unique rhino and elephant conservation project. Work to secure the future of the black rhino in Zimbabwe and help in the day to day running of a privately ...
How much: from US$1,995 (2 weeks) Combine rhino and elephant conservation with small animal care and primate rehabilitation in Zimbabwe. Experience life in a 10,000 acre conservancy dedicated to black rhino protection, and work in a s...
How much: from US$1,995 (2 weeks) A fantastic opportunity to volunteer as a Field Assistant in two of Zimbabwe’s most magnificent national parks. Join a team of professional rangers, learn to track and monitor big game including...
Horse Riding & Rhino Conservation Location: Zimbabwe
How much: from US$1,155 (1 weeks) The perfect volunteer project for horse riders as you combine horseback safaris, anti-poaching patrols and cattle ranching with hands-on volunteer work with endangered black rhinos and elephants. L...